मलेसियामा २३ नेपाली कामदार पक्राउ « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
मलेसियामा २३ नेपाली कामदार पक्राउ
६ जेष्ठ २०७२, बुधबार २१:३५ मा प्रकाशित
क्वालालाम्पुर, ६ जेष्ठ । मलेसियाको केलाङ कपरमा रहेका डि लक्स फुड सर्भिस एस.डि.एन. बि.एच.डि. बाट गत हप्ता २३ जनालाई त्यहाँको पुलिसले पक्राउ गरेको छ ।
२३ जना कामदार पक्राउ पर्दा समेत कम्पनील कुनै वास्ता गरेको छैन । पक्राउको विषयलाई लिएर कम्पनीमा कुरा गर्दा कुरा गर्नेहरुलाई नै उक्त कम्पनीले धम्की दिँदै काम गर्ने भए गर नत्र तिमीहरुलाई पनि जेल पठाईदिन्छु भन्ने गरेको पाइएको छ ।
गत मे ११ तारिकमा पक्राउ परेका नेपालीहरु के कारण पक्राउ परे भन्ने बारेमा कम्पनीले जानकारी दिएको छैन । डिलक्स फुड सर्भिसमा नै काम गर्ने राम नेपाल यस कम्पनीमा बिना कारण कामदारहरु माथि अत्याचार हुने गरेको बताउँछन् ।